कोरोना खोपमा माननीयका आफन्त र कार्यकर्ताको रजाइँ - Paschimnepal.com
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभा सांसद प्रभा कोइराला करिब १० जना लिएर बुधबार प्रदेश सभा भवन प्रांगणमा पुगिन् र, कोभिशिल्ड खोप लगाएर पठाइन् ।
‘नियमानुसार हुन्न भन्न सक्नुहुन्न ? सांसद थापाले झपारे, ‘मानिसहरु यत्तिकै आएर बसेको होइन, लिएर आएको हो । त्यति पनि थाहा छैन हामीलाई ? यस्तो बेइज्जेत पनि गर्न हुन्छ ?’अनलाइन खबरबाट
प्रकाशित मितिः बिहिबार, जेष्ठ २७, २०७८ 5:11:38 AM
Prevदेशभर थपिए ३ हजार ४४९ जना कोरोना संक्रमण
Nextकोभिडविरुद्धको खोप लगाउनेलाई एक खिल्ली गाँजा उपहार